एनआरएन नेताको भोजमा रक्सीको हारालुछ ! – Saurahaonline.com
एनआरएन नेताको भोजमा रक्सीको हारालुछ !
काठमाडौं : अहिले विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली काठमाडौंमा भेला भएका छन् । मंगलबारदेखि गैरआवासीय नेपाली संघको नवौँ विश्व सम्मेलन हुन लागेकाले विश्वभरका एनआरएन प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेला भएका हुन् ।
मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म चल्ने विश्व सम्मेलनबाट नेतृत्व चयन गरिने हुँदा उम्मेदवारहरुले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेकन उपायहरु अबलम्बन गरिरहेका छन् ।
हुन पनि विश्वभरबाट छानिएर आएका २५०० प्रतिनिधिले जम्मा ४२ जनाको कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा नेतृत्वमा दाबी गर्नेमात्रै दुई सयको हाराहारीमा छन् । यसरी चर्को प्रतिस्पर्धा भएको एनआरएनमा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेकन प्रयास गर्नु नौलो होइन । त्यसमा मत किनबेचदेखि मतदाता रिझाउन अनेकन ‘फन्डा’ भइरहेको छ ।
यसैक्रममा कोषाध्यक्षमा उम्मेदवार महेश कुमार श्रेष्ठलेपनि मतदाता रिझाउन मदिराको सहारा लिएका छन् । उनले सोमबार राति ललितपुरको कुपन्डोलस्थित होटल हिमालयमा मदिरासहितको भव्य भोजको आयोजना गरेका हुन् ।
सो भोजमा एनआरएन प्रतिनिधिका साथै उम्मेदवारहरुलाई बोलाइएको थियो । करीब ५०० जनाको लागि निम्ता दिइएको भएपनि हजार जना भन्दा बढी सहभागि भएपछि आयोजकलाई भीड व्यवस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे परेको थियो । पेय पदार्थको रुपमा वियरदेखि महंगा ह्वीस्कीसम्मको व्यवस्था गरिएको पार्टीमा मदिराको अत्याधिक खपत भएको एक सहभागीले बताए ।